कोरियामा भिषा सकिन लागेका हरुको भिषा थपिने हल्ला साँचो हो ? जान्नुहोस !
यतिबेला दक्षिण कोरियाको अनलाईन पोर्टलले डिसेम्बर महिनाको २ तारिखमा प्रकाशन गरेको समाचार ले कोरियामा रहेका विदेशी श्रमिकहरुमा अन्योलता छाएको छ।
कोरियन भाषामा लेखिएको उक्त समाचारमा कोरोनाको कारण भिषा थपिने भनेर उल्लेख गरिएतापनि विस्तृत सुचना नआएका कारण सामाजिक सन्जालमा तरङ्ग पैदा भएको छ।
कामदार अभावमा छटपटाएको कोरियाले गत अप्रिल १३ तारिख देखी डिसेम्बर ३१ तारिखसम्म भिषा सकिने श्रमिकको १ बर्ष भिषा अबधी थपेको थियो।अहिलेसम्म करिब ६५ हजार श्रमिकको १ बर्ष भिषा थपिएको छ।
कोरियाली समाचार माध्यममा १ बर्ष भिषा थपिने भनेर डिसेम्बर २ तारिखमा समाचार प्रकाशित भएतापनि यसको विस्तृत सुचना नआएसम्म थपिने/नथपिने आधीकारिक रुपमा यसै भन्न सकिने आधार छैन।यधपि पुन: भिषा थपिने बिषयमा बिभिन्न सम्बन्धित निकायहरुमा छलफल भने भईरहेको थियो।
कोरियन भाषामा प्रकाशित समाचार लाई नेपालीमा उल्था गर्दा यसो भनिएको छ।
साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव समाधान गर्न विदेशी कामदार भित्र्याउने क्रम पनि बढाइएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण स्वदेश प्रवेश गर्ने विदेशी कामदारको सङ्ख्यामा प्रतिबन्धका कारण यस वर्ष असोज १ गतेसम्म ६ हजार ५० अर्थात कुल कोटाको दशांश मात्रै कामदार भित्रिएका छन् ।
सरकारले सबै पठाउने देशहरूमा प्रवेश अनुमति दियो र प्रवेश गर्नु अघि खोप पूरा भइसकेको र पीसीआर परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको आधारमा देश प्रवेश गर्नेहरूको संख्याको सीमा हटायो।
साथै, ३ वर्ष वा ४ वर्ष १० महिना सेवा गरी स्वदेश फर्कनु पर्ने विदेशी कामदार (E-9, H-2) को बसाइ र जागिर खोज्ने अवधि एक वर्ष थप गरिएको छ। गत वर्षको १ गतेसम्म कुल ६५ हजारले आफ्नो बसाइ र रोजगारी अवधि थपेका छन् ।
रणनीति र अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हामी साइटमा नियामक नवप्रवर्तन कार्यदल र आर्थिक समूहका प्रमुखहरूसँग बैठकहरू मार्फत व्यवसाय र व्यवसायी समुदायसँग सञ्चार गर्नेछौं, र क्षेत्र उन्मुख मार्फत व्यापारको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न प्रयास गर्नेछौं।
कोरियन भाषामा प्रकाशित समाचार पढौँ।
थप जानाकारीका लागी हामीसंगै रहनुहोला।